नेपालमै ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने तयारी, हिमालको पानी शुद्ध हुनाले लागत सस्तो पर्ने ! - Laltin Media
Home»इकोनोमी»नेपालमै ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने तयारी, हिमालको पानी शुद्ध हुनाले लागत सस्तो पर्ने !
नेपालमै ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने तयारी, हिमालको पानी शुद्ध हुनाले लागत सस्तो पर्ने !
By लाल्टिन डट कम June 22, 2022 Updated: June 22, 2022 No Comments2 Mins Read
सरकारले देशभित्रै हाइड्रोजन उत्पादन प्लान्ट स्थापना गर्न तदारुकता देखाएको छ । देशभित्रै एक सय मेगावाट जलविद्युत् खपत क्षमताको हाइड्रोजन प्लान्ट स्थापना गर्ने गरी अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले परामर्श सुरु गरेका छन् । ग्रिन हाइड्रोजनबारे अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेको काठमाडौँ विश्व विद्यालय मातहतको ग्रिन हाइड्रोजन ल्याबका पदाधिकारीलाई मङ्गलबार अर्थ मन्त्रालय बोलाएर यसबारे छलफल गरेका हुन् ।
उनले तत्काल एक सय मेगाावाटको हाइड्रोजन प्लान्ट लगाउने विषयमा आवश्यक अध्ययन र प्राविधिक सहयोग जुटाउने कार्यमा संलग्न हुन ल्याबका पदधिकारीलाई निर्देशन दिए । अर्को बैठक लगानी बोर्डको कार्यालय समेतको सहभागितामा गर्ने योजना शर्माको छ ।
प्लान्टको सम्भाव्यता, लागत, बजार सिर्जनाबारे अर्थमन्त्री शर्माले गहन परामर्श गर्नुभएको बैठकमा सहभागी केयूका सहप्राध्यापक विराजसिंह थापाले बताए । बैठकको सुरुमै हाइड्रोजन प्लान्ट स्थापनाबारे चासो राख्नु भयो,” उनले भने, “अर्थमन्त्री शर्माको चासो हेर्दा हाइड्रोजन उत्पादनको नीतिगत तथा सैद्धान्तिक बहस मात्र नभई कार्यमूलक उपलब्धि नै सुनिश्चित गर्न खोजेको देखियो ।” शर्माले लगानी बोर्डमार्फत यस्तो परियोजनामा लगानी गर्न लगानीकर्ताको खोजी गर्ने जानकारी गराएका थिए ।
छलफलमा ग्रिन हाइड्रोइजन ल्याबका प्रमुख विराजसिंह थापाले सय मेगावाटको परियोजना स्थापना गर्न करिब २० अर्बसम्म लगानी लाग्न सक्ने सैद्धान्तिक आकलन रहेको जानकारी गराए । “तर यो अनुमान एकेडेमिक स्टडी मात्र हो,” थापाले भने, “यसबारे थप अध्ययन गरेर मात्र वास्तविक आंकलन हुन सक्छ ।” एक सय मेगावाटको ग्रिन हाइड्रोजन प्लान्ट डेढ वर्षमा तयार गर्नेगरी अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूले प्रस्ताव गरिरहेको जानकारी गराएका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनका आधारमा नेपालमा हाइड्रोजन उत्पादन लागत सस्तो पर्ने देखिएको छ ।
नेपालको पानीमा स्वच्छता हुने भएकाले यो परियोजना सस्तो पर्ने देखिन्छ । “हिमालयन देशको शुद्ध पानी हाइड्रोजन उत्पादनका लागि उपयुक्त हुने विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । त्यसैले नेपालको हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रको पानी प्रयोग गरेर हाइड्रोजन उत्पादन गर्यौं भने धेरै फाइदा पुग्छ । निर्यातमा कोसेढुङ्गा साबित हुन सक्छ,” थापाले भने ।